Booliska iyo nabadsugida Soomaaliya la wareegay Balcad & Xaadoole oo baxsaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Booliska iyo nabadsugida Soomaaliya la wareegay Balcad & Xaadoole oo baxsaday
19th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Ciidamada booliska iyo nabadsugidda Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay degmada Balcad oo maalihii lasoo dhaafay ay gacanta ku hayeen maleeshiyo taabacsan gudoomiyihii hore ee degmadaas ee xilka laga qadaay balse madax adeygay, Cusmaan Maxamed Maxamuud (Xaadoolwe).
La wareegidda ciidamada booliska iyo nabadsugidda ee degmada Balcad ayaa timid kadib markii shalay degmadaas lagu weeraray ciidamo boolis ah oo ka tegay Muqdisho, kuna sii jeeday magaalada Jowhar ee xarrunta gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana weerarkaas ka dhashay dhimasho iyo dhaawacd, iyadoo booliska laga qaatay qaar ka mid ah gaadiidkii ay wateen.
Saaka ayaa waxaa Muqdisho ka baxay ciidamo aad u hubeysan oo isugu jira boolis iyo nabadsugidm, kuwaasoo dagaal muudo socday la galay maleeshiyaadkii uu horkacay Xaadoole, waxaana markii dambe magaalada u haray ciidamadi dowladda Soomaaliya ka dirtay Muqdisho, halka Cusmaan Xaadoole magaalada ka baxsaday.
Ciidamada booliska iyo nabad suggida, ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen gudoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee degmada Balcad, Axmed Maxamed Duqow, loona soo qaaday magaalada Muqdisho, sida uu xaqiijiyey Daa’uud Xaaji Ciiro oo ah afhayeenka maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dagaalka maanta ka dhacay degmada Balcad oo shacabka ku qasbay iney guryahooda ku ekaadaan ayaa waxaa ku dhintay hal ruux, laba kalana waa ay ku dhaawacmeen, inkastsoo tirade inyaa ka badelnaan karto.
Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhaxe, Cabdi Jiinow Calasow oo waraabhinta la hadlay ayaa sheegay in qaar ka mid ah ciidamadii uu watay gudoomiyihii Balcad Cusmaan Xaadoole gacanta lagu dhigay, waxa uuna tilmaamay in hada lagu daba jiro sidii loo soo qaban lahaa Xaadoole.
Waxaa jira warar sheegaya in gudoomiyihii hore ee Balcad Cusmaan Xaadoole uu u baxsaday dhanka tuulada Xawaadley oo dhanka woqooyi kaga began degmada Balcad.
Gudoomiyihii hore ee Balcad Cusmaan Xaadoole ayaa horay u sababay inuu degmada Balcad mari waayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdi Jiinow Calasow, iyadoo gudoomiyuhu marka uu Jowahr ka tegayo ee Muqdisho rabo uu mari jiray waddooyin qardajeex ah.
Somali President: Saudi Arabia has been a constant friend to Somalia throughout the years of trouble
EU Special Envoy pledges support to the outcome of Prime Minister’s visit to Kismayo